Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Voatsindry hazolena ny vahoaka madinika
Inty sy Nday : Voatsindry hazolena ny vahoaka madinika
Na dia fotokevitra nijoroan’ny fiaraha-monina Malagasy hatramin’ny taona 1975 aza ny ady amin’ny tsy fitovian-tsaranga dia mandrak’ity ny androany, ny kely tsy mba mamindro mihitsy, ary ny vahoaka madinika voatsindry hatrany. Mibaribary izany any Moramanga any noho ny afitsoky ny orin’asa Fanalamanga. Fa inona angaha, hoy ianao no mitranga ?
Tamin’ny 1969 dia nisy ny fandaharan’asam-panjakana ho amin’ny fambolen-kazo ka nisy ny fakan-kevitra natao tamin’ny mponina ny taona 1970. Niainga avy amin’izay dia nisy ny fifanarahana nifanaovana fa hatsangana ny orin’asa Fanalamanga ka tsy hazo ala na kininina no hovolena fa hazo kesika. Tafiditra tao anatin’ny tanim-panjakana voafaritra fa hanatanterahana ny tetik’asa ny tanin’olon-tsotra. Nisy tamin’izany tanin’olon-tsotra izany no efa vita titra sy baorina, ary tao ny tsy mbola vita titra fa andalam-pikarakarana. Nifanaraka tsotra fotsiny tamin’izy ireny anefa ny Fanalamanga fa voly kesika no atao ka indray mandeha mamboly sy mikapa ihany. Izany hoe mandritra ny 25 taona.
Ireo mponina tompon’ny tany vita titra na tsy mbola fa efa nanajary tamin’izany, tsy mba nahazo tambiny tamin’izany findraman’ny Fanalamanga ny taniny izany na iraimbilanja aza.
Tonga taty amin’ny 1996 dia nisy ihany ny tany nialan’ny Fanalamanga ka noraisin’ny tompony. Avy dia novolen’ny tompony hazo kininina. Nisy koa moa ny “fafinanahary”, izany hoe ny voan’ny hazo kesika notsofin’ny rivotra ka tonga teny amin’ny tanin’olon-tsotra, dia naniry ho azy teny anelanelan’ny kininin’olona teny. Noheverin’ny mponina fa anjarany satria naniry ho azy teo amin’ny taniny, saingy niverina tampoka ny Fanalamanga ka na ny kininina novolen’ny mponina na ny kesika naniry voajanahary na ny vala fiompian’ny mponina, sy ny asa fiveloman’ny mponina, dia nofaritan’ny Fanalamanga ho azy avokoa. Nanomboka ny taona 2017, hatramin’ny arina (charbon) nataon’ny mponina tamin’ny kininina novoleny no norobain’ny Fanalamanga dia nohosihoseny tamin’ny fiara 4X4 dia nasaina noraofin’ny mponina tompony hoe “ireo ny arinareo”. Ny famaky na antsim-bilona eny an-tanan’ny mponina, nalain’ny Fanalamanga an-keriny eny antanan’ny mponina fa hoe “handeha hikapa hazon’i Fanalamanga”. Ny bisikileta taingenan’ny mponina ka mandalo amin’ny faritry ny Fanalamanga, izay lalana fizoran’ny mponina, dia gejain’i Fanalamanga. Nisy mihitsy ny fotoana niharan’ny tifitra tamin’ny basy tamin’ireo mponina raha nijoro nanao fihetsiketsehana mba hitakiany ny zony izy ireo.
Velaran-tany nahatratra 200.000 Ha no novolen’ny Fanalamanga kesika tamin’ny 1974 ary misy tamin’ireo, faritra sasany, izay mahatratra 3000 Ha izay an’olon-tsotra. Ny sasany teny antsefatsefan’ny tetik’asa tany no efa an’ny mponina.
Misy ny tetika handroahana tamin’ny toerana nonenany hatramin’ny raiamandreniny tany aloha tany, efa ho zato taona. Voan’ny tsindrihazolena ny mponina ka miantso ny fitondralm-panjakana ambony hanelanelana ary hijery ny zon’izy ireo satria ny azy ihany izao na ny nohajariany indray no ahitany loza. Misy amin’ireo mponina moa no voagadra am-ponja satria nangataka tany sy nitaky ny zony, tsy nangalatra na namono olona na nanimba zavatra.